Boorsada meeldhexaadka ah ee suunka garabka dahaaran ee bacda meeldhexaadka ah ee kuleylka kuleylka leh
Qalab: 420D TPU, 420D TPU tarpaulin
Astaamaha: Biyo-xireen, dahaaran, Eco-saaxiibtinimo
Magaca badeecada: Boorsada dahaaran
Midabka: Buluug, Cawl, Cagaar
Cabbirka: Cabbirka Caadada La Aqbalay
Daabacaadda: shaashad xariir ah
Awoodda: 30 qasacadood
Adeegga: Oggolow OEM ODM
Awoodda Bixinta: 5000 Piece/Pieces per Month 10000-20000
Faahfaahinta Baakadaha: 1 pcs boorsada qaboojiyaha qabow oo lagu rido bac poly, 1 kumbiyuutar ayaa lagu ridayaa kartoon
Tirada (Cadad) 1 - 1000 1001 - 2000 2001 - 5000 > 5000
Qiyaasta Waqtiga (maalmo) 35 45 50 In laga wada xaajoodo
* * Qaboojiyaha Awoodda Weyn: Boorsada qaboojiyaha bakayle waxay bixisaa meel waasac ah oo qaadi karta ilaa 30 gasacadood, leh meel ku filan dhammaan cabitaannada iyo cuntada maalintaada qiimaheedu yahay.
* * Waxqabadka Dahaarka Sare: Qalabka gudaha ee qaboojiyaha jilicsan waa xumbo dahaarka cufnaanta sare leh iyo filimka TPU-ga aan biyuhu lahayn, oo loogu talagalay jaakado hawo leh si looga hortago luminta hawo qabow iyo biyo. Rinjiga sare wuxuu cabbitaannada iyo cuntada ka dhigaa kuwo qabow 48-72 saacadood.
* * Boorsada dhabarka ee raaga oo raaxo leh: Qaboojiyaha boorsada dhabarka wuxuu ka samaysan yahay naylon 420D ah kaas oo aan si fudud u dillaaci doonin, jeexi karin, ama xoqin, biyo-la'aan iyo daadin la'aan, fududahay in la nadiifiyo, oo miisaankiisu yar yahay in la qaado. Xumbada dambe ee suufka oo si buuxda loo hagaajin karo garbaha garbaha ayaa bixiya raaxada iyo taageerada ugu badan.
Naqshad-hawleedyo badan: Ergonomic T-qaab-siib-siibiyaha iyo siibadaha siraha leh ayaa u oggolaanaya furfurnaan iyo xidhitaan siman, cufnaanta sare ee shabakaddu waxay ku siin kartaa taageero ku filan iyo boos dhaladaada.
* * Qabow heer sare ah ama haynta kulul, oo ku habboon socodka, kaamamka, kalluumeysiga, jimicsiga, BBQ -yada, qadada, iyo waxqabadyada kale ee bannaanka.
Waxqabadka Qaboojinta Sare: Dahaarka tayada sare leh ee 3 lakab oo gaar ah ayaa u wada shaqeeya si cuntadaada iyo cabitaanadaada loo qaboojiyo ilaa 3 maalmood. Lakabka sare wuxuu leeyahay dusha biyo-caddeyn taas oo hubinaysa dhidid la'aan, lakabka dhexe waa xumbo cufnaanta sare leh oo gudaha waxaa si buuxda loogu daboolay alaab aan dillaacin.
* * 100% Leakproof and Resistant Resistant: Qaboojiyaha jilicsan ee bakaylaha wuxuu leeyahay qolof aan biyuhu lahayn oo adag oo u adkaysan kara daloolada iyo shucaaca UV. Zipper-ka Airtight oo leh tab si fudud loo jiido wuxuu bacda ku hayaa caddeyn dillaac ah oo qabow.
Hore: Boorsada Qaboojiyaha ee Qadarka ah ee Bacda Qadada ah oo La -Dhigi karo iyo Sanduuqa Qadada Qaboojiyaha Qaboojiyaha
Xiga: Bacaha dahaarka leh ee bacda qaboojiyaha saaxiibtinimo leh ee bacda qaboojiyaha qadada madow
Bacda meeldhexaadka ah ee burbura
Bacda meeldhexaadka ah
Bacda Qaboojiyaha Barafka
Bacda Qaboojiyaha La Qaadan Karo
Bacda meeldhexaadka ah ee biyuhu
Custom bireed aluminium biyuhu coole dahaaran ...
Bag meeldhexaadka ah Bag Qado Collapsible iyo Ins ...
Bacaha dahaaran bacda qaboojiyaha saaxiibtinimo bl ...